Nhau - Brocade Boka rakaburitsa China-Central neEastern Europe Ehupfumi neZvekutengeserana Cloud Fair uye Chengdu Special Cloud Fair
Brocade Boka rakaburitsa China-Central neEastern Europe Ehupfumi neZvekutengeserana Cloud Fair uye Chengdu Special Cloud Fair
Musi waGumiguru 28th, Chengdu akabudirira kubata iyo China-Central neEastern Europe Ehupfumi neZvekutengeserana Cloud Fair uye Chengdu Special Cloud Fair. Ichi chiitiko chikamu chakakosha che2020 China-Europe International Trade Digital Exhibition. Liu Xiaoliu, Mutevedzeri Meya weChengdu Municipal People's Government nevatungamiriri vane hukama, Vatungamiriri nechikwata cheChina Council yekusimudzira kweInternational Trade, mumiriri wenhume dzeEU kuChina, vamiriri veChengdu digitaimari ehupfumi hwevashandi Brocade Artificial Intelligence Group naAotai Chiremba vakapinda mhemberero yekuvhura kwechiratidziro. Kubata kwechiitiko ichi kwakaratidza hutano hwekudyidzana pamwe nehupfumi pakati peChengdu neEurope munguva yepashure pechirwere, uye zvakare yakaisa simba idzva rekuwedzera kubatana kwakadzika pakati peChengdu neEurope.
Dr. Guo Sha, sachigaro weBrocade Artificial Intelligence Group, Mai Hao Fang, purezidhendi, pamwe nechikwata chemagetsi epasi rose chekutengeserana vakapinda mumusangano uyu, uye musangano usati watanga, vakapinda mumusangano nevatungamiriri ve Chengdu Municipal Government, United Nations International Trade Center, madhipatimendi ehurumende yeChinese neCentral neEastern Europe, masangano emabhizinesi uye Vamiriri vebhizinesi vaive nekudyidzana kwoushamwari.
Chen Jian'an, mutevedzeri wasachigaro weChina Council yeKusimudzira Kwekutengeserana Kwenyika Dzepasi Pose, akaenda kumhemberero yekuvhura uye akapa hurukuro kuburikidza nevhidhiyo. Mukutaura kwake, Chen Jianan akataura kutenda kwake kwemoyo wese kumayuniti akakodzera eChina Council yekusimudzira kweInternational Trade uye neChina Chamber yeInternational Commerce nerutsigiro rwavo rwakasimba uye kutora chikamu chinoshingairira. Chiratidziro ichi chakaitirwa kurangarira makore makumi mana nemashanu ekugadzwa kwehukama pakati peChina neEU uye kusimudzira kusimudzira nyika dzeChengdu neCentral neEastern Europe.
Liu Xiaoliu, Mutevedzeri Meya weChengdu Municipal People's Government, akaunza kukurumidza kukurumidza kweChengdu kuvaChinese nevashanyi vekunze vakatendeka pachiratidziro. Akataura kuti Chengdu yakakosha hupfumi hwenyika, hunyanzvi, mari, tsika nemagadzirirwo, mari yekunze pamwe nekubatanidzwa kwepasi rose kunozivikanwa neHurumende yeKanzuru. Iyo yepakati hub, nepaki uye chikuva semutakuri, inounza mapurojekiti ekudyara senge digitaalinen hupfumi, STEAM dzidzo, yesainzi uye tekinoroji hunyanzvi hwekuyedza hwaro, tsika yekushanya, uye yepamusoro-tech. Chengdu anotarisira nemoyo wese kuti vanamuzvinabhizimusi vanobva kumativi ese epasi vachatsvaga mikana yekubatana naChengdu muminda yekugadzira zvine hungwaru, simba girini, zvekurapa zvigadzirwa, dhijitari kugadzirwa kwetsika, uye zvigadzirwa zvepasirese, uye vanotsvaga kufambiswa kwebhizinesi pamwe nekufambira mberi kwemaguta.
Shure kwaizvozvo, Mumiriri weEuropean Union kuChina, Yu Bai, akataura kuti China yapfuura United States kuti ive nyika huru yekutengeserana yeEuropean Union kekutanga kubvira 2020. China neCentral neEastern Europe nyika dzine nyika dzakabatana. zvakanaka, kubatana kwakasimba uye tarisiro yakafara yekushandira pamwe. China-Central neEastern Europe Economic and Trade Cloud Fair, yakatenderwa neHurumende yeKanzuru uye yakarongedzwa neKanzuru yeKusimudzira Kwekutengeserana Kwenyika Dzepasi Pose, yakagamuchira kutarisisa kukuru uye kuzivikanwa kubva kune vekunze vemabhizimusi. Semunhu mukuru anotengesa waChengdu, Europe inotarisira kuti makambani kubva kumativi ese achatora mukana we "17 + 1 mushandirapamwe" kuti vabate zvizere mukana we "Belt uye Road" musika muhombe. Gadzira yepasi rose hupfumi nekutengeserana nharaunda ,joinha muchiitiko chikuru uye utsvage kubatana.
Panguva imwecheteyo, iyo 2020 China Europe International Trade Dhijitari Yekuratidzira yakaitisawo musi iwoyo. Makambani mazana maviri nemazana maviri echiChinese uye zviuru gumi nezviviri zvevashanyi vanobva kuEurope vachapinda muchiratidziro ichi online. Makambani makumi matanhatu eChengdu anobva kuminda yekuchenjera kugadzira, girini simba, dhijitari tsika uye kugadzira, zvekurapa zvigadzirwa, logistics, nezvimwewo zvakaonekwa padhijitari yekuratidzira chikuva cheChina Kanzuru yeKusimudzira kweInternational Trade. Brocade Boka rakaratidzirazve pane ino kuratidzwa kwegore kuburikidza ne STEAM smart dzidzo, yakakwira-tsananguro odhiyo uye vhidhiyo zvigadzirwa zvemagetsi, nzvimbo dzedigital uye mimwe minda. Mukubvunzurudzwa, Dr. Guo Sha vakati kutora chikamu kweBrocade Group mune zvakanaka kunoitirwa kusimudzira kuvandudzwa kwehupfumi hwedhijitari hweChengdu pamwe nekubatana kweboka remagetsi zvigadzirwa.
Mukutaura kwake, Lu Yiji, sachigaro weDhijitari Association, akati hupfumi hwedigital hwakapinda zvishoma nezvishoma mukudyara nekutengesa. China ndiyo musika mukuru pasi rose maererano neuwandu hwekutengeserana, unosvika US $ 600 miriyoni muhafu yekutanga yegore rino, ichipfuura United States, United Kingdom, Japan nedzimwe nyika. Nhaurirano dzepamhepo Kutengesa, kutenga, uye kutepfenyura pamhepo pamhepo zvave kuita mukurumbira. Dhijitari tekinoroji inounza indasitiri shanduko uye inosimudzira mafomu matsva ekutengeserana. Chombo uye chichava chiitiko chemberi icho chinobatsira vanhu venyika.
Mutambo uyu wakaitirwa neChina Council yeKusimudzira Kushambadzira Kwepasi Pose uye neChengdu Municipal People's Government, uye yakaitirwa neChina Chamber yeInternational Commerce, China Council yeKusimudzira kweInternational Trade (China Chamber of International Kukwidziridzwa kwekutengeserana nekudyara muEurope yasvika padanho nyowani.